တစ်ခါတစ်လေ တကယ့်ကို ထွက်မှဖြစ်မှာမို့ အပြင်ကို ထွက်ရတိုင်း သွားရာလမ်းမှာ မထင်မှတ်ပဲ ရည်းစားအဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆုံနေခဲ့တာ မနေ့ကနဲ့ဆို နှစ်ခေါက်တိတိ ရှိနေပြီ။ ကံကြမ္မာက အတိတ်ဟောင်းဘက်ဆီကို ပြန်ပြီး ခေါ်ငင်ယူသွားချင်တာလား။ တမင်တကာ မချိန်းထားပဲနဲ့ ဆုံတွေဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဒီလို မြို့ကြီးတစ်မြို့ထဲမှာ ရှေ့တည့်တည့်က လျှောက်လာခြင်းတွေ၊ မီးပွိုင့်တစ်ခုတည်းမှာ လမ်းကူးဖို့ စောင့်နေရခြင်းတွေဟာ ကံကြမ္မာရဲ့လက်ချက် မကင်းဘူးလို့ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ်။ ကံကြမ္မာနဲ့ အစေးမကပ်လှတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ပြုံးပြခြင်းတွေ၊ နှုတ်ဆက်ခြင်းတွေ မရှိခဲ့တာကိုလည်း သူမ နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ "ဒိုးရတော့မယ် အချစ်ရေ .. နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်" ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဆွဲချမသွားချင်တာ ကျွန်တော့်ဆန္ဒပါ။
ဒါကို နားလည်နိုင်မှာပါ။ ရင်ခုန်လား မခုန်လား မသိခဲ့ပေမယ့် စိတ်မလှုပ်ရှားဘူးလားလို့ မေးလျှင်တော့ အမှန်အတိုင်း လှုပ်ရှားပါတယ်လို့တော့ ဖြေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်မှန်းကို မသိလို့ လှုပ်ရှားပါတယ်လို့ပဲ ခြုံပြီး ဖြေရတာမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အေးအေးဆေးဆေး မိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်သလိုမျိုး နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ "နင် နေကောင်းလား အေးဆေးပဲလား .." ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြောမထွက်ခဲ့ဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းသလိုမျိုးကြီး ခံစားနေရတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာကို ဘာ့အတွက် ဝမ်းနည်းသလဲ ဆိုတာကိုလည်း ပြောမပြနိုင်ပြန်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက် ကုန်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိအချိန်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာလား၊ ကိုယ်နဲ့ ရှိနေစဉ်မှာ သူခံခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေအတွက် ဝမ်းနည်းမိတာလား။ ဘာကိုမှ ရေရေလည်လည် မတွေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုပဲ ရပ်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်။
တကယ်တော့ အဝေးကနေပဲ ရပ်ကြည့်နေခဲ့မိတာပါ။ သူမမျက်နှာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး။ သူမရဲ့ မျက်လုံးတွေကနေ ထွက်ကျလာမယ့် စကားတွေ၊ နှုတ်ခမ်းဖျားကနေ ထွက်ပေါ်လာမယ့် စကားတွေ အကုန်လုံးကို ကျွန်တော် မကြားရဲခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပြုံးပြခြင်း၊ နှုတ်ဆက်ခြင်းတွေ မရှိခဲ့တာကို ကျွန်တော့်မျက်နှာကနေတဆင့် သူမ သိနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကြာလာခဲ့တဲ့ အချိန်တွေနဲ့အမျှ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ခံစားမှုတွေလည်း လိုက်ပြီး ရင့်ကျက်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားမိတာ လက်တွေ့မှာကျတော့ လွဲချော်နေသလို ဖြစ်နေပါလား။ အဲသလိုနဲ့ မျက်နှာကို လွှဲ လမ်းကို ခွဲခဲ့မိတယ်။
ဒီလို ဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး သူမ ရယ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ဘာမှ မပြောနိုင်ပဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ငေးကြည့်ပြီး ထွက်သွားတဲ့ ရည်းစားအဟောင်းကို ကြည့်ပြီး အောင်နိုင်သူတစ်ယောက်လို သူမ ရယ်မောချင် ရယ်မောနေလိမ့်မယ်။ (ဒါ့အတွက် ကျေနပ်ပါတယ်)။ သူမသာ သတိထားပြီး ကြည့်မိခဲ့လျှင် ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်က လွယ်ထားတဲ့ သူမ ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ လွယ်အိတ်အဟောင်းလေးကိုလည်း မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလွယ်အိတ်ကြောင့်ပဲ သူမကို ဒီတစ်ခေါက် နှုတ်မဆက်မိပြန်တာလားလို့ ကျွန်တော် တွေးမိပါသေးတယ်။ အဲဒီနေ့ကလည်း တကယ့်ကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူမ ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီ လွယ်အိတ်ကိုမှ လွယ်ပြီး အပြင်ကို ထွက်မိတဲ့ ကျွန်တော်။ ဒါတွေဟာ ဒီအချိန်မှာ ဘာဖြစ်လို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာဖြစ်နေတာပါလိမ့်။
ရည်းစားအဟောင်းနဲ့ တစ်ခါမှ ပြန်မဆုံဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ရည်းစားအဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆုံလျှင် ဘယ်လို နေမယ်၊ ဘာကို ပြောမယ် ဆိုတဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုံးဝ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ ဘာမှ မပြောနိုင်၊ လှည့်ထွက် ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့မိတယ်လို့ ထင်တယ်။ တကယ်ဆိုရင် သူ့ဘဝ အသစ်နဲ့ သူ၊ သူ့အချစ်သစ်နဲ့ သူ၊ သူ့မိသားစုနဲ့ သူ အောင်မြင် ပျော်ရွှင်နေတာကို ဝမ်းသာမိတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော် ထုတ်ပြောခဲ့သင့်ပါတယ်။ အခုလို အချိန်ကျမှ ဒီလို တကယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးလာနိုင်တာပါ။ တကယ် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ဆုံနေရတုန်းကတော့ တစ်ခွန်းမှတောင် ဟနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူမကို အရင်ကအပေါင်းအသင်းတွေကတဆင့် မြင်မိ ကြားမိတိုင်း ဝမ်းသာစိတ် ဖြစ်မိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း သူမကို ကျွန်တော် ပြောခဲ့သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘဝကို စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ဖြတ်သန်းသွားရတာ မကြိုက်ပေမယ့်လည်း လူအများစုအတိုင်း စက်ရုပ်လို ဖြတ်သန်းမှ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ သူမကို မြင်မိပြန်တော့လည်း ကျွန်တော် ဝမ်းသာတာပါပဲ။ ဒါကို အချစ်လို့ ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်း ခေါ်ပေါ့လေ။
တကယ်တော့ ဒီအရွယ်နဲ့ ဒီအချိန်မှာ မေတ္တာလို့ ပြောင်းခေါ်လျှင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ရှိသလား၊ မရှိသလား မသိတော့ပေမယ့် သူမ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်တိုင်း ဝမ်းသာမိတဲ့ စိတ်ကတော့ ရှိနေဆဲပါပဲ။
၀၁ - ၁၂ - ၂၀၁၂
Posted by ချမ်းညီချို at 17:43
ရွှတ်ခဲ့ဖတ်ခဲ့သည် ရှိသော် .. မရွှတ်ခင်၊ မဖတ်ခင်မှာ
ဘုရား .. ဘုရား ကိုတောင် ကျယ်ကျယ်ဟပြီး မတရဲဘူး၊ အန်မှာစိုးလို့ လို့ ပြောရမတတ်အောင်ပဲ သုံးလေးရက်ဆက်တိုက် ရှိရှိသမျှ အန်ထွက်ခဲ့ရတော့ 'ဒီဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါတယ်လေ ..' ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရင်က ယုံကြည်ချက်လေး ဘယ်နားကျပျောက်လို့ သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဒီထိုးဆေးတွေ၊ သောက်ဆေးတွေကိုလည်း နားမလည်နိုင် ဖြစ်မိတယ်။ သူတို့နဲ့ အသားတကျဖြစ်လာပြီ၊ အဆင်ပြေလာပြီလို့ ထင်ပြီး ဝမ်းသာနေခဲ့မိတာလည်း အခုတော့ လေထဲ လွင့်လို့ သွားပြန်တာပါပဲ။ ခြောက်ရက်၊ ခုနစ်ရက်လောက် နေမကောင်းဖြစ်ရတာဟာ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း တော်တော်ထိခိုက်စေတယ်လို့ ထင်တယ်။
ကျိန်းသေပေါက် ထိခိုက်မှာပါ။ လူဟာ ဝေဒနာ ခံစားနေရချိန်မှာ ကောင်းတဲ့အတွေး၊ ပျော်စရာအတွေး နဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတွေးတွေကို ဘယ်မှာလာပြီး တွေးနိုင် စဉ်းစားနိုင်မှာတုန်း။ ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက မကောင်းတဲ့အတွေးတွေပါ ခေါင်းထဲကို ရောက်ရောက်လာတာ။ ဘာကိုမှန်းမသိ လက်လျှော့လိုက်ချင်တဲ့ အတွေးတွေ၊ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အတွေးတွေ မယ်မယ်ရရ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ခေါင်းထဲကို ရောက်ရောက်လာကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလေ ဆိုပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ အရှုံးတွေလည်း ပေးနေခဲ့မိသေးတယ်။ ကိုယ်က မကျန်းမာတော့ စိတ်နဲ့အတွေးတွေပါ လိုက်ပြီး မကျန်းမာသလို ဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်။ ခုချိန် မှန်ထဲ သွားကြည့်လိုက်လျှင် ခိုရုပ် ထွက်နေလောက်ပြီ။ ခိုကတောင် အရှုံးပေးရလောက်အောင်ကို ညည်းမိနေတဲ့ ဘဝရောက်နေပြီ။
ဒီလို ဘဝမှာ ဒီလိုပဲ ငြိမ်နေလို့တော့ လုံးဝ မဖြစ်ဘူး။ နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်း မသွားနိုင်လျှင် ဆေးခန်းကို ကိုယ့်ဆီလာဖို့ လုပ်ရမယ်။ မနက်ဖြန် ထပြီး ဆေးရုံကို သွားနိုင်လျှင် သွား၊ မသွားနိုင်လျှင် ဆေးရုံက ကားကို လာခေါ်ခိုင်းရမယ်လို့ သေသေချာချာ စဉ်းစားထားလိုက်တယ်။ ဒီလောက်ကြီး နေမကောင်းဖြစ်တာ သိပ်တော့ အထာမကျဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်မိတယ်။ စာရေးစာဖတ် လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့၊ ကွန်ပြုတာသုံးဖို့ မပြောနဲ့ အိပ်ရာထဲက လူကိုတောင် အပြင်ရောက်အောင် ထွက်မလာနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်မှန်း ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။
အခုလို ညသန်းခေါင်ကျော်ကျမှ ခေါင်းနည်းနည်း ထူလာနိုင်တယ်။ မျက်လုံး ဖွင့်နိုင်၊ ကွန်ပြုတာကိုလည်း ခလုတ်ဖွင့်နိုင် ဖြစ်လာတယ်။
အဲလို လူလည်း မျက်လုံးဖွင့်နိုင်၊ ကွန်ပြုတာလည်း ဖွင့်နိုင် ဖြစ်လာချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး လုပ်ချင်တာကတော့ စာတစ်ပုဒ်လောက် ရေးထားခဲ့ချင်တာပါပဲ။ အကယ်၍များ အခန့်မသင့်လို့ "ရွှတ် .." ကနဲ အသက်ကလေးများ ထွက်သွားခဲ့သည်ရှိသော်၊ "ဖတ် .." ကနဲ လိပ်ပြာကလေးများ လွင့်သွားခဲ့သည်ရှိသော် "အားလုံးကို သတိရပါတယ် .." လို့ မရွှတ်ခင်၊ မဖတ်ခင်မှာ ပြောသွားချင်တာပါ။
ဒီလိုပဲ၊ သတိရကြောင်း သာကြောင်း မာကြောင်းနဲ့ နာကြောင်း ပေါ့။ ။
၂၉ - ၁၁ - ၂၀၁၂
Posted by ချမ်းညီချို at 02:45
သူတို့ကလည်း ချစ်တယ် ကျွန်တော်ကလည်း ချစ်တယ်
ဒီနေ့ အိပ်ရာနိုး၊ မျက်စိနှစ်လုံး ဖွင့်လိုက်ကတည်းက ဖေ နဲ့ မေ့ကို သတိတွေရနေမိတာဟာ မနေ့ညက မအိပ်ခင်မှာ သူတို့အကြောင်းတွေကို စဉ်းစားနေပြီးမှ အိပ်ပျော်သွားခဲ့လို့လားတော့ မသိဘူး။
"တခြားဟာတွေကို ခေါင်းထဲ ထည့်မနေနဲ့ဦး၊ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်၊ ကျန်းမာရေးကို အရင် ဂရုစိုက်ပြီး လုပ်လိုက် ... သိလား .. သား။"
မာမီ့မွေးနေ့ ဖုန်းလှမ်းဆက်တုန်းက ဖေကြီးရဲ့ သေသေချာချာ မှာလိုက်တဲ့ စကား။ ဟုတ်တယ်၊ ဖေကြီးလို အမြဲတမ်း မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်အထိ အလုပ်တွေ အမြဲကြိုးစားပြီး လုပ်နေမိခဲ့ရင် ကျွန်တော်မှာ့လည်း ကျန်းမာရေးက ကောင်းနေလောက်တယ်လို့ တွေးလိုက်မိတယ်။
ခန်းဆီးကို ဆွဲမဖွင့်ဖြစ်သေးပေမယ့် မပြင်မှာ မိုးတွေ ဖွဲကျနေတယ်၊ အရောင်တွေက မှောင်မှောင်နဲ့ မှိုင်းကျလို့ နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ရိပ်မိနေပါတယ်။ ပြုတင်းမှန်ကို လာလာတိုးပက်ပြီး လွှင့်စင်လို့ထွက်ခွါသွားရတဲ့ မိုးစက်တွေရဲ့ အော်သံတစ်ချို့ကိုတောင် ကြားမိသလိုပဲ။ အလို တူချင်မှ တူပေမယ့် အားမတန်တဲ့ အဆုံး အရှုံးပေးလိုက်ရပုံမျိုးနဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ လေကြမ်းကြီးတွေနောက် လိုက်ပြီး ယိမ်းလို့နေကြရတာကိုလည်း မြင်ရမယ်၊ သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနားလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ငှက်တစ်ကောင်မှ မရှိတဲ့ ဟောဒီဝန်းကျင်မှာ သစ်ပင်တွေ အားလုံးဟာ မိုးစက်နဲ့ လေအောက်မှာ ရှက်ပြီး ခေါင်းကို ငုံ့သျှိုးလို့ နေနေကြရမယ် ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော် ရိပ်မိနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခန်းဆီးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်မယ့်လက်တွေဟာ လေထဲမှာ ရပ်တန့်လို့နေတယ်။
မာမီ့မွေးနေ့တုန်းက ဖုန်းကို ပထမဦးဆုံး လာကိုင်တဲ့ မမအိက "ဟဲ့! မောင်ချမ်းရဲ့ .. စားချင်ချင် မစားချင်ချင် အတင်းသာ အစားကို ဝင်အောင် စား၊ သိလား။ ဒါမှ ဒီဟာက ကုလို့ ရမှာ။ အဲလို စားရင်း စားရင်းနဲ့ မင်းအစ်ကို ကိုတင်မောင်ထွန်းလည်း အခု ဝိတ်ပြန်လျှော့လို့တောင် မရတော့ဘူး၊ ဟီ ဟိ .. တဲ့ ။" နဂိုကတည်းကမှ အစားအသောက်စားဖို့ ပျင်းတာ အခံရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒီ ဆေးတွေကြောင့် ပိုပြီး အစားမစားနိုင်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ကြရှာတယ် ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ပြန်လာပြီးတော့ မိသားစုနဲ့ အိမ်မှာနေပြီး ဆေးကုတာကို မခံပဲ၊ ဒီအင်္ဂလန်မှာလည်း ဘယ်သူနဲ့မှ တွဲမနေပဲ တစ်ယောက်တည်းနေပြီး ဆေးကုတာကို လုပ်မယ်လို့ သေချာကြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ရန်ကုန် ပြန်လာဖို့ကိစ္စကို ထပ် မပြောလေတော့ဘူး။ သူတို့ကလည်း ချစ်တယ်၊ ကျွန်တော်ကလည်း ချစ်တယ်၊ အဲဒါကြောင့်ပါပဲ။ "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ မှန်ကူကွက်များ" ဆိုတဲ့ စကားလုံး (စီးရီးတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းစဉ်) ကို ပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။
မာမီက ဒီတစ်ခေါက် သူ့ရဲ့ လက်ရာတွေက နည်းနည်း စပ်သလို ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် နောက်တစ်ခေါက်ကျရင် အစပ်လျှော့ဖို့ နဲ့ ငါးကြော်တို့ ဒါမှမဟုတ် ငါးပိကောင်ကြော်တို့ လုပ်ရင် ကောင်းမလားလို့ မေးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ကြုံတုန်း "မာမီ .. ငါးကလေးအိုးကပ်တို့ ဘာတို့ စားရလျှင် တော်တော် ကောင်းမလား မသိဘူး၊ သိလား " ဆိုပြီး အကြံပေးသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ အမေ့ကို ကပ်ချွဲလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ မာမီက လက်ဘက်ခြောက်တွေ လွဲသွားတဲ့ကိစ္စကို စိတ်ညစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်က ရေနွေးသောက်တဲ့ လက်ဘက်ခြောက် လိုချင်တာကို ဆိုင်တွေမှာ လက်ဘက်ရည်ဖျော်ရောင်းတဲ့ လက်ဘက်ခြောက်အချိုမှုန့်တွေနဲ့ မှားပြီး ထည့်ပေးလိုက်မိလို့ တဗျစ်တောက်တောက်။
မွေးနေ့ မုန့်ဟင်းခါးအကြောင်း မေးတော့ "ဪ .. သားရယ် မွေးနေ့အထိတောင် မစောင့်နိုင်လို့ မနေ့ကတည်းက တစ်ရက်ကြိုပြီးတောင် ချက်စားလိုက်ပြီ .." တဲ့။ မာမီ့လက်ရာ မုန့်ဟင်းခါးကို မစားရတာ ကြာလှနေပြီ။ ခုချိန်ထိ မုန့်ဟင်းခါးဆိုရင် မာမီ့လက်ရာကပဲ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်နေတုန်း။ ဒါကို ပြောလိုက်လျှင် "သားရယ် .. အဲဒါကြောင့် ဒီကို ပြန်လာပါလို့ ပြောတာပေါ့" လို့ပဲ ထပ်ပြောလေမလား မသိ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ မှန်ကူကွက်များမှာ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ မိဘတွေကလည်း ကိုယ်နေမကောင်းတဲ့အတွက် သူတို့ဆီပဲ ပြန်လာပြီး သူတို့ ပြုစုတာကို ခံစေချင်တယ်၊ ကိုယ်ကလည်း နေမကောင်းတဲ့အတွက် သူတို့ဆီပြန်ပြီး လူမမာအဖြစ်နဲ့ နေရင်း သူတို့ကို ဒုက္ခ မပေးချင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကလည်း ချစ်တယ်၊ ကျွန်တော်ကလည်း ချစ်တယ် ဆိုတာ၊ အဲဒါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလကားကုသခွင့် ရှိနေတဲ့ ဒီအင်္ဂလန်မှာနေပြီး ဆေးကုတာက ပိုပြီး ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ဟိုတစ်နေ့က ကိုဝင်းမင်းနဲ့ ဖုန်းပြောတုန်းက ပြောဖြစ်သေးတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တင် မဟုတ်ပဲ ဆေးဝါးတွေရဲ့ အရည်အသွေးက အစ ပိုပြီး စိတ်ချရတယ် ဆိုတာတွေလည်း ပါတာပေါ့လေ။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီမှာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာက ဒီလောက် အရေးမကြီးပါဘူး၊ ဒီဒုက္ခက သေးသေးလေးပါလို့ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေပီပီ ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာ နေရတာကိုတော့ ပိုပြီး သဘောကျတာ ကျိန်းသေတာပေါ့။ သူတို့၊ ကိုယ်တို့တွေက နောက်ဆုံးမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာပဲ ခေါင်းချချင်စိတ်ကလေးက သွားတူနေပြန်သေးတယ်။
ဒီနေ့ အိပ်ရာနိုးကတည်းက ဖေကြီး နဲ့ မာမီ့အကြောင်း ထိုင်စဉ်းစားနေမိတာ ပုံမှန် ကိုက်နေကျ ခေါင်းတောင် မကိုက်ပဲ နေပါလားဆိုတာကို အခုမှ သတိထားမိတယ်။ အိပ်ရာနိုးလာတိုင်း အမြဲတမ်း ခေါင်းရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းက ကိုက်ကိုက်နေကျလေ။ ဒီနေတော့ အိပ်ရာနိုးပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ဒီစာတိုကို ထိုင်ရေးနေ၊ ထိုင်တွေးနေရင်း ခေါင်းမကိုက်ဖြစ်ဘူး။ ဪ! .. မိဘမေတ္တာ ဆိုတာ ဒီလောက်အထိ စွမ်းပကားကြီးမားပါကလား။ ။
၂၁ - ၁၁ - ၂၀၁၂
Posted by ချမ်းညီချို at 16:50
စက္ကူလေယာဉ်ပျံလေးလို ဝဲချင်ရာ ဝဲခဲ့မိတယ်လို့
ညက အိပ်လို့ မရခဲ့တဲ့အတွက် အခုမနက်မှာ လူက အိပ်ရာထဲကနေ မထွက်ချင်လှဘူး။ (အခုမနက်အစား အခုနေ့လယ်လို့ ပြောင်းပြီး ပြောရင် ပိုမှန်မယ် ထင်တယ်)။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၁၃း၀၀ နာရီနားမှာ လက်တံတွေက ဝဲနေတယ်။ အပြင်မှာ ရာသီဥတုက ဘယ်လိုလဲ သိချင်လာတာနဲ့ ခန်းဆီးကို မရဲတရဲ ဆွဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ မဆိုးပါဘူး၊ လင်းလင်းချင်းချင်းတော့ ရှိသားပဲ။
အမြဲတမ်း ကိုက်နေကျဖြစ်တဲ့ ဒီဦးခေါင်းကြီးကို ခေါင်းအုံးပေါ်ကနေ ဆွဲမလိုက်တယ်။ ခြေထောက်တွေကို စောင်ခြုံထဲကနေ တဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်နေတုန်းမှာ ကော်ဖီဖျော်ဖို့ နွားနို့ ကုန်နေတယ် ဆိုတာကို ရိပ်ကနဲ သတိရမိလိုက်တယ်။ ဒီနေ့တော့ သီရိဂျေမောင်မောင် (ဘလက်ကော်ဖီ) နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားရတော့မယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေသွားပေါ့။
အစာနဲ့ တွဲသောက်ပါလို့ မှာထားတဲ့ ဆေးငါးလုံးကို ဒီအတိုင်းပဲ ရေနဲ့ ရောသောက်ပစ်လိုက်ရင်း ကိုက်နေတဲ့ ခေါင်းအတွက်ပါ ပါရာစီတမောနှစ်လုံးကို ရက်ရက်ရောရောကြီး တွဲသောက်ချပစ်လိုက်တယ်။ ဒီလောက် ဖျားချင်နာချင် နေမကောင်းချင်နေတာ တွေ့ကြသေးတာပေါ့လို့ မထင်မှတ်ပဲ ရွတ်မိလိုက်တယ်။ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်အထိ လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အထာမျိုး။ စိတ်ထဲမှာတော့ ကိုယ် နဲ့ ဒီရောဂါ ဝေဒနာတွေနဲ့ ထိပ်တိုက် စီးချင်းထိုးကြတော့မလိုလို ပြင်ဆင်ထားလိုက်မိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်မိတယ်။ ဖျားစမ်း! ဘယ်လောက် ဖျားမလဲ! ကြည့်ကြသေးတာပေါ့လို အထာပေါ့။
ကြာသပတေးနေ့က ထိုးဆေး ထိုးရတော့ သောကြာ နဲ့ စနေ နှစ်ရက်မှာ စာတိုလေး တစ်စောင်လောက်ပဲ ရေးလိုက်နိုင်လောက်အောင်ကို လူက မှောက်နေခဲ့တာ။ ကွန်ပြုတာသုံးမယ် ဆိုပြီး ဒီစကရင်ကြီးရှေ့ ရောက်လာရင် လူက အန်ချင်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ ပြန်လှဲနေမိတဲ့ အချိန်တွေ တော်တော်များတယ်။ အသုံးတည့်လျှင် တည့်နိုင်တယ်လို့ ထင်မိတဲ့အတွက် နာရီဝက်လောက် အောက်ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့မိသေးတယ်။ အပြင်ထွက်လျှင် ကိုယ်ပူရှိန်က ပိုတက်လာတယ်လို့ ထင်မိတဲ့အတွက် အိမ်ထဲကို ပြန်ပြန်ဝင်လာမိတယ်။
ဆိုင်တယ် မဆိုင်တယ် မသိဘူး။ ဆရာငြိမ်းအေးအိမ်ရဲ့ စာတွေ ဖတ်ချင်လာမိတယ်။ အဲသလိုနဲ့ ဖြစ်စဉ်က မသုံးတော့ပဲ ပစ်ထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘုဒ်ထဲ ပြန်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ရောက်သွားတယ်။ သုံးခေါက်မြောက် ထည့်လိုက်တဲ့ ပတ်စ်ဝါဒ်က မှန်သွားတဲ့အတွက် ချောချောမောမောပဲ စာတွေကို ဖတ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ သီရိဂျေမောင်မောင်တစ်ခွက်နဲ့ ပွတ်ချွန်းတစ်လိပ် ပြင်ထားလိုက်ပြီး စဖတ်တော့ တကယ်တမ်းမှာ ခေါင်းက မူးလာတော့ သုံးလေးပုဒ်ပဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲသလိုနဲ့ပဲ ပြုတင်းပေါက်နားမှာ လေသွား ရှူလိုက်၊ စကရင်ပေါ်က စာသားတွေကို ပြန်လာဖတ်လိုက်နဲ့ပေါ့။ (တော်တော်လေးကို အဆင် မပြေဘူး)။ လက်ထဲမှာ စာရွက်တွေကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ပြီး ဖတ်ရတဲ့ အရသာကို ပြန်တမ်းတလာမိတယ်။ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတာ ဒါပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ။
စာဖတ်ရတာ အဆင်မပြေလို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်လျှင် ကောင်းမလား ဆိုပြန်တော့လည်း စိတ်က မကြည့်ချင်ပြန်ဘူး။ (ဟုတ်တယ်၊ နေ့ခင်းဘက် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကို ကျွန်တော် သိပ်မကြိုက်လှဘူး)။ မနေ့ညကတော့ (အိပ်မက်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့) ဖေကြီးနဲ့ မာ့မီရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ဗီဒီယိုကားလေး တစ်ကားအဖြစ် ရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ဝိုးတိုးဝါးဝါးနဲ့ ထင်နေတယ်။ အိပ်မက်အနေနဲ့ မက်ခဲ့မိတာလား၊ ဒီလို လုပ်မယ်လို့ ကျွန်တော် စိတ်ကူးခဲ့မိတာလားကို ကျွန်တော် အခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ မသေချာဘူး။ မေမေရဲ့ မွေးနေ့အကြောင်းရယ်၊ မအိတို့ သားအမိတွေ ရန်ကုန် အလည် ပြန်မယ့် အကြောင်းတွေကို သွားပြီး စဉ်းစားလိုက်မိလို့နဲ့ တူပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီမှာ ဘာတွေ လုပ်နေပါလိမ့်။
ဘဝက ခေါက်ရိုးချိုးလှလှလေးတွေနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ သွားချင်ရာ သွားလို့ လေထဲ ပစ်တင်လိုက်တဲ့ စက္ကူလေယာဉ်ပျံလေးလိုပဲ ဝဲချင်ရာ ဝဲခဲ့မိတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ စနစ်တကျနဲ့ ခေါက်ရိုးလေးတွေကို လုပ်နေချိန်မှာရော၊ လေထဲ ပစ်တင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာရော လှပနေခဲ့တဲ့ စက္ကူလေယာဉ်ပျံလေးဟာ ဝဲချင်ရာနေရာတွေကို ဝဲခဲ့ပြီး၊ တခါတလေတော့လည်း လေကြောင်းသင့်သလို ဝဲခဲ့ပြီး အဆုံးသတ်တော့ အောက်ကို ပြန်ထိုးကျလာနေပြီ။ ဒီ စက္ကူလေယာဉ်ပျံလေးဟာ တကယ်တော့ (ကျွန်တော့်) ပြင်္ကဒိန်တွေ၊ သက္ကရာဇ်တွေ နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ လေထဲမှာ ဝဲနေခဲ့တုန်းက ကမ္ဘာကြီးကို အပေါ်စီးက မြင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း ထင်မိခဲ့သေးတယ်။
အဆုံးသတ်မှာ ဘယ်နေရာကို ဘယ်လို ထိုးဆင်းသွားမလဲ ဆိုတာကတော့ ပိတ်ကားပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှူပါ ခင်ဗျား ပေါ့။
၁၈ - ၁၁ - ၂၀၁၂
Posted by ချမ်းညီချို at 16:55
မလိုချင်ငြင်းပယ်ခဲ့ ဒီမေတ္တာတရားတို့ရယ် ... အို ... ရင်ထဲပြန်ပြီး သိမ်းဆည်းသွားပါမယ်
မကြာခင်လေးမှာပဲ အဝေးကို သွားတော့မယ် .. ဒီအချိန် မင်းကိုကွယ် ငါ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်
မပြေလည်ခဲ့တာလည်း မင်းရင်ထဲရှိလျှင် .. ကျေပါ ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်တော့ကွယ်
မလိုချင်ငြင်းပယ်ခဲ့ ဒီမေတ္တာတရားတို့ရယ် ..
အို .. ရင်ထဲပြန်ပြီး သိမ်းဆည်းသွားပါမယ်
ကျေပါ ကိုယ့်ကို အင်း ခွင့်လွှတ်တော့ကွယ်
အိမ်ပြန်ချိန်လေးမှာ ဝမ်းနည်း နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်
ဒီအချိန်မှာ မင်းရဲ့ အပြုံးလေး .. ခဏလောက် ရချင်တယ်
မပြေလည်စရာ အကြောင်းတွေရှိလည်း ခဏလောက် မေ့ပစ်ခဲ့
ဟိုအရင်အတိုင်းပဲ ..ဘာမှ မပြောင်းလဲ
မင်းရဲ့အနားက အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေကွယ်
ငါတို့ ဝေးလေတဲ့ ဘဝတာ လမ်းမရယ် .. တစ်ခါတစ်လေတော့ ပြန်ပြီး သတိရလိုက်ပါကွယ်
ပျော်စရာတွေကြုံခဲ့ အင်း အတိတ်ကအကြောင်းတွေနဲ့ .. ကျေပါ ကိုယ့်ကို အင်း ခွင့်လွှတ်တော့ကွယ်
ကျေပါ ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်တော့ကွယ်
"ကျန်တာတွေ လျှောက်မတွေးပါနဲ့ ဗျာ ဘ၀က တကယ်တိုပါတယ်။ ဖြစ်သမျှတွေ ဆက်သာရေးပါ။ Forget the world ! " လို့ မနေ့က ကျွန်တော့်စာမှာ Anonymous အနေနဲ့ ပေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သတိရလာတော့တယ်။ ဟုတ်သားပဲ၊ ဒီလို တစ်နှစ်လောက် ဆေးကုပြီးသွားရင် ကိုယ်လည်း ပြန်ပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်သွားမှာပဲ မဟုတ်လား။ အချို့ဆရာဝန်တွေပြောသလို ကုလို့ မရတဲ့ လူ ၂၀% ထဲ ပါသွားပြီး အသည်းကင်ဆာနဲ့တော့ ဘဝက ဇာတ်လမ်း ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ရအောင်ဗျာ အသည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မကောင်းမှုရယ်လို့ တစ်ခုမှ ကိုယ်က လုပ်ဖူးတာမှ မဟုတ်တာ။ ဟုတ်တယ်မှတ်လား။ (ဟုတ်ပါတယ်! .. ဟုတ်ပါတယ်!)။
အဲသလိုနဲ့ အစာနဲ့ တွဲသောက်ပါလို့ မှာထားတဲ့ ဆေးငါးလုံးကို ဒီအတိုင်း အစာမရှိပဲ အရည်ဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီနဲ့ တွဲသောက်ပစ်လိုက်တယ်။ အမှန်တကယ်က ဒီနေ့ အိပ်ရာနိုး ကွန်ပြုတာဖွင့်ပြီးကတည်းက ကိုရွှေရေးပေးလိုက်တဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ " နှုတ်ဆက်ခြင်း" ဆိုတဲ့ နားထောင်နေမိတာ။ ဒီအပေါ်က စာသားတွေက အဲဒီသီချင်းရဲ့ စာသားတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီစာကို ရေးအပြီး အဲဒီ ဗီဒီယိုနဲ့ တွဲမယ်ချိတ်မယ် အလုပ်မှာ တွဲလို့ မရ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို လုပ်နေတာ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ပွတ်ချွန်းတစ်လိပ် ကုန်နေပြီ၊ ခုထိ မရသေးဘူး။
စကားမစပ် နောက်အပတ်မှာတော့ ဒီအသည်းရောင်အတွက် ကုလို့ အဆင်ပြေတဲ့ အိမ်နေရာတစ်ခုကို ပြောင်းဖို့ လိုက်ရှာဦးမှပဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ နေမကောင်းလည်း ဒီလိုပဲ ကြိတ်မှိတ်ပြီး အပြင်ကို ထွက်ရမှာပဲ။ လက်ရှိအိမ်နေရာက နေရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ ဒီအကြောင်းကို "စိတ်ညစ်ရတာ တစ်ခုခု" မှာ ရေးလိုက်ဖူးတယ်။ အဲလိုဆိုတော့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မယ်။
ဟော! ဒင်း ဒေါင် တူ တောင် နဲ့ ကျွန်တော့်အစ်မ မထက် ဂုဂယ်လ်ထဲကို ရောက်ရှိလာလေရဲ့။
ကျွန်တော်က ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ၊ ခုချိန်ထိ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေမိတဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကံကြမ္မာတွေ၊ ချစ်သူကံကြမ္မာတွေ အကြောင်း သူ့ကို ပြောပြမလို့ လက်ပြင်နေတုန်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ထက် အငယ် ညီမဝမ်းကွဲတစ်ယောက် မနက်ဖြန် မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လို့ သူက တန်းပြောတယ်။
၁၇ - ၁၁ - ၂၀၁၂
Posted by ချမ်းညီချို at 13:41
Labels: စကားစမြည်, ငြိတွယ်, အက်ဆေး, အက်ဆေးဆောင်းပါး
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ မျက်နှာများတတ်ပုံနှင့် မှတ်တမ်းမှတ်စု
၁၄ - ၁၁ - ၂၀၁၂ (ကြာသပတေးနေ့)
ဆေးထိုးပြီးသွားရင် အရင်ကလို ချက်ချင်းသွေးတိတ်မသွားတာက သုံးခေါက်၊ ထိုးပြီး ဆယ်စက္ကန့်ပြည့်အောင် ပါးစပ်ကနေ တစ် .. နှစ် .. သုံး .. လေး နေတုန်းမှာတင် ခေါင်းထဲမှာ မိုက်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာက နှစ်ခေါက်။
အခု စပြီး လုပ်နေတဲ့ (ကျွန်တော့်ရဲ့) ဆေးကုသမှုနုတ်စ်စာအုပ်လေးထဲမှာ အဲသလို ချရေးထားလိုက်တယ်။ ထိုးပြီး သွေးမတိတ်တာက သုံးခေါက်ဆိုတော့ ရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်။ သုံးပတ်ဆိုတော့ အောင်မယ်! တစ်လနီးပါးတောင် ရှိလာပါပေါ့လား။ ဒါမျိုးက ဒီလောက် သုံးလေးပတ်ကြာအောင် စောင့်မနေသင့်ပဲ ချက်ချင်းပြောပြသင့်တဲ့ဟာမျိုးလား၊ ဒါမှမဟုတ် စကားအဖြစ် ပြောပြစရာကို မလိုအောင် လုံးဝ အရေးမကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုလား။ (ကျွန်တော် မသိဘူး)။ အရင်နဲ့ မတူလို့ စာအုပ်ထဲမှာ ချမှတ်ထားလိုက်တာပဲ ရှိတယ်။ အပ်မဖြုတ်ရခင်မှာကို ခေါင်းထဲမှာ မိုက်ကနဲဖြစ်သွားတာကတော့ နှစ်ခေါက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကလည်း အရင် အခေါက်တွေက လုံးဝ မဖြစ်ဘူး။ ဒါ ကောင်းတဲ့အချက်လား၊ မကောင်းတဲ့အချက်လား ဆရာဝန်မဟုတ်တော့ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုး အချက်အလက်လေးတွေကို စာအုပ်လေးတစ်အုပ် သီးသန့်ထားပြီး ချချရေးမှတ်ထားတော့မယ်လို့ အရင်အပတ် ဘုသျှေနဲ့ ဖုန်းပြောတုန်းက စပြီး စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အသုံးတော့ ဝင်မှာပဲ သေချာတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ သိလား -
ဆေးရုံချိန်းရှိလို့ ဆေးရုံသွားတဲ့နေ့ကျရင် " မောင်မင်းလူကလေး! ဘယ်လိုလဲ နေကောင်းလား .." ကနေ စပြီး "ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ .." ဆိုပြီး ဝင်ဒီက မေးမှာပဲ။ (စကားမစပ် - ဒီ 'မောင်မင်းလူကလေး ..' ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေက သူတို့ ပေါင်တံရှည်လူဖြုတွေထက် လူကောင်သေးလို့ ရှေးတုန်းက စာရေးဆရာကြီးများက ဒီလို မောင်မင်းလူကလေး လို့ သုံးခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဒီစကားလုံးကို ရှေးတုန်းက အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်မှု ခံနေရချိန် နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းမျိုး စာအုပ်စာပေတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးခဲ့လို့သာ ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေပြီး 'မောင်မင်းလူကလေး' လို့ အခု လိုက်သုံးပြီး ရေးကြည့်လိုက်တာ၊ တကယ်တော့ ဒီစကားလုံးရဲ့ တကယ့်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သမိုင်းကို ကျွန်တော် မသိဘူး။ သတ်ပုံကျမ်းထဲမှာ သွားရှာကြည့်လျှင်လည်း တွေ့ရမယ်လို့ မထင်ဘူး)။
ဪ! နေပါဦး၊ ပြောနေရင်းနဲ့ အတွေးတော်က ဘယ်ကို ချော်တောငေါ့သွားပြန်တာပါလိမ့် ..
ဪ! .. ဆေးရုံချိန်းရှိလို့ ဆေးရုံသွားတဲ့နေ့ကျရင် ဝင်ဒီက ထုံးစံအတိုင်း " မောင်မင်းလူကလေး! ဘယ်လိုလဲ နေကောင်းလား .." ကနေ စပြီး "ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ .." ဆိုပြီး မေးမယ်။
အဲဒီအခါကျရင် ကိုယ်က နုတ်စ်စာအုပ်ကို ဟန်ပါပါနဲ့ ဖပ်ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ".. ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ ဝင်ဒီရေ ..အဟမ်း!" ဆိုပြီး ဖြစ်သမျှကို အချက်အလက်တွေနဲ့ တိတိကျကျ နေ့စွဲနဲ့ အချိန်ပါမကျန် အကုန် သေသေချာချာ စုံစုံစေ့စေ့ ပြောပြလိုက်မယ်။ ဒီလို စာအုပ်နဲ့ စနစ်တကျ ချမှတ်ထားတာကိုသာ ဝင်ဒီမြင်လိုက်ရင် "ဟယ်! ငါ့ ဗမာပြည်က လူမမာလေးက တော်လိုက်တာ၊ အဆင့်မြင့်လိုက်တာ။ ကြည့်စမ်းပါဦး၊ ဖြစ်သမျှကို တိတိကျကျ စနစ်တကျ ရေးထားမှတ်ထားတယ်၊ တော်လိုက်တာ၊ တော်လိုက်တာ .." ဆိုပြီး ဖြစ်သွားမှာ ကျိန်းသေတယ်။
အဓိကအချက်ကတော့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ နေရာတကာမှာ စည်းစနစ်တကျနဲ့ အဆင့်အတန်း မြင့်မြင့် နေတတ်ထိုင်တတ်ကြောင်းကို ဒီအင်္ဂလိပ်မတွေ သိသွားစေချင်တာပါပဲ။ (တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ စေတနာက အဲလို)။
ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ကြားထဲကကို နောင်လာလူသားတွေအတွက် အချက်အလက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရေးသွင်းသွားခဲ့တာကို သူတို့ တော်တော် သဘောကျလိမ့်မယ်။ ဒီအင်္ဂလိပ်တွေ၊ စပိန်တွေ ဒီလို မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ရေးသွင်းတာကို ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်ကြသလဲ၊ တန်ဖိုးထားကြသလဲဆိုတာ ပညာ တတ်/ရှိ သူတိုင်း သိကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၁၅ - ၁၁ - ၂၀၁၂ (သောကြာနေ့)
မနေ့ညက အဲသလောက်ပဲ ရေးလိုက်နိုင်တယ်။ ထိုးဆေးရဲ့ အရှိန်က ပြလာတယ်လို့ ထင်တာပါပဲ၊ ကိုယ်အပူချိန်က အရမ်းမြင့်လာပြီး ဖျားချင်သလိုကြီး ဖြစ်လာတာနဲ့ စောင်ခြုံထဲ ဝင်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်သွားတယ်။
အဲသလိုနဲ့ ဒီနေ့ နေ့ခင်းဘက်ကျမှ အိပ်ရာက ပြန်နိုးလာတယ်။ နိုးနိုးချင်း (ထုံးစံအတိုင်း) အိမ်သာတက်တယ်၊ ကော်ဖီတစ်ခွက် သောက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုဝင်းမင်းကို သူပေးထားတဲ့ အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လှမ်းပြောရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား အတော်ကြာအောင် ဖုန်းပြောနေမိတယ်။ ဖုန်းက ပြောနေ ပြောနေရင်းနဲ့ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူ့ကို ကျွန်တော့် ရောဂါ ဝေဒနာတွေအကြောင်း ညည်းပြနေခဲ့မိတယ်။ ဒီလိုမျိုး အခြားသူတွေကို ကိုယ့်ရောဂါအကြောင်း ညည်းပြပြီး သူတို့ပါ ရော စိတ်ညစ်သွားအောင် လုံးဝ မလုပ်ပါဘူးလို့ ဒီလောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် စည်းကမ်းချထားခဲ့တဲ့ကြားကနေ သတိလက်လွတ် ဖြစ်ပြီး ပြောနေမိတယ်။ အခြားသူတွေ ကိုယ်နဲ့ ရောရောပြီး စိတ်ညစ်ညစ်သွားတာကို မကြိုက်ဘူး။ (အဲဒါကြောင့် များသောအားဖြင့် လူရွှင်တော်ပဲ လုပ်တယ်)။ ဒီနေ့ကျတော့ ဆေးတွေရဲ့ အရှိန်ကြောင့်ပဲလား ဒါမှမဟုတ် သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က ရင်ဘတ်ချင်းနီးတဲ့ သူတွေမို့လို့လားတော့ မသိဘူး တော်တော်ပြောဖြစ်သွားတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ကိုယ့်ကြောင့် သိပ် စိတ်မညစ်ရစေဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးကတည်းက ဒီလိုနေမကောင်းတာတွေ၊ ဘာတွေကို သိပ်ပြောပြလေ့ မရှိတော့ဘူး။ (ဒါမှားလား မှန်လား ကျွန်တော် မသိသေးဘူး။ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ၊ ဒီအကြောင်းကို နောက်ကျရင် စာတိုလေး တစ်တိုလောက် ရေးဖို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်)။
ဆိုတော့ "နေကောင်းလား ..." ဆိုရင် ကောင်းတယ် ပဲ၊ "အဆင်ပြေလား ..." ဆိုရင်လည်း ပြေတယ် ပဲ။ မပြောမဖြစ် ပြောရမယ်၊ မဖြေမဖြစ် ဖြေရမယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာလျှင်တော့ အဲဒီလူပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ပြောစရာ မလိုဘူး၊ ဖြေစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်လျှင် သူ့ကို ပြောစရာ၊ ဖြေစရာ မလိုအောင် ကိုယ်က နေနေလိုက်တာပါပဲ။ (ဒါမှန်လား၊ မှားလား ကျွန်တော် မသိဘူး)။
စိမ်းကားတယ်လို့ ထင်သွားတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီဘဲက အထာကိုင်တယ်ဟ လို့ ထင်သွားတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ အမြင်ကပ် သွားတာပါပဲ။ (ကျွန်တော့်ကို) အမြင်ကပ်သွားပြီး အပေါင်းအသင်းဆက်မလုပ်တော့တာ၊ ရှိနေတဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို ရပ်/ဖြတ် တောက် လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာပါပဲ။
များသောအားဖြင့် ဒီလိုနဲ့ပဲ ဝေးဝေးသွားခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒီလိုနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ဒီအပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေ၊ ရည်းစားဟောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ယှက်နွယ်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတိုင်း (အနည်းနဲ့အများ) / (နည်းနည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ကျွန်တော်တို့ ပျော်ခဲ့ဖူးကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ နည်းနည်းပါးပါးပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ လက်ရှိအချိန် နဲ့ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန် ဆိုတာ ဟောဒီ အချိန်တစ်စက္ကန့် မရှိတရှိလေးက ဟိုဘက် နဲ့ ဒီဘက်ကို ရွေ့သွားတာလေးပဲ။ အဓိကအကျဆုံးကတော့ အဲဒီအချိန်ကို လက်ခံလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ပဲပေါ့။ ။
၁၅ - ၁၁ - ၂၀၁၂
Posted by ချမ်းညီချို at 18:02
Labels: အက်ဆေး, အက်ဆေးဆောင်းပါး